Saturday July 03, 2021 - 19:49:00 in Maqaallo by Mohamed Muse Mohamed
Sanadihii 1970-kii ilaa iyo 1971-kii Waxa uu waxbarashada dugsiga sare ku dhameystay Dugsiga Sare ee Sheekh Xassan Barsame ee Magaalada Muqdisho xilligaasoo lagu dhiganayay luuqadda Talyaaniga).
Sanadkii 1972-kii waxa uu tababar ciidan u galay kulliyadda millateriga ee General Da’ud Millatery Academy ee ku taallay Magaalada Kismaayo.
Sanadkii 1975-kii waxa uu tababar u aaday Midowga Soofiyeeti gaar ahaan Kuliyadda Milatiriga ee Linin ee Magaalada Moskow oo lagu barto culuunta siyaasadda iyo arimaha millateriga.
Sanadkii 1977-kii wuxuu ku soo laabtay dalka waana markii uu dhamaaday xiriirkii uu dalku la lahaa dalkii Midowga Sofiyeti
Sanadihii 1978-kii ilaa 1984-kii waxa uu nasiib u helay inuu tababr ciidan u aado Dalka Germany waxa uuna shahaadada Msc Mechanical Engineering, jaamacadda Rostok ee Dalka Jarmalka.
Sanadkii 1985-kii ayuu dalka ku soo laabtay waxa uuna jagooyin kala duwan ka soo qabtay Ciiddanka Asluubta Soomaaliyeed, waxa uu madax ka noqday Hogaanka Siyaasada ee Ciidanka Asluubta Hogaanka Gaadiidka Ciidanka Asluubta iyo Hogaanka War Isgaarsiinta Ciidanka Asluubta.
Allaah U Naxariistee Allaah U Naxariistee Janaraal Cabdulqaadir Cali Diiriye (Subxaanyo) markii uu dalku burburka galay waxa uu aad ula shaqeeyay hay’ado samafal, sidoo kale waxa uu madax ka noqday gudigii Shaqadoodu ahayd dhaxdhaxaadinta hogaamiyayaashii kooxaha koonfurta soomaaliya ee (Pressure Group).
Janaraal Cabdulqadir Cali Diiriye (Subxaanyo) wuxuu soo noqday taliyihii hore ee Ciidamada Asluubta Soomaaliya sidoo kale waxa uu la taliye u ahaa dhamaan dowladihii ku mel gaarka ahaa ee dalka soo maray waxa uu ku soo noolaaday wadamada England Holand iyo Ruushka, waxa uuna si wanaagsan ugu hadli jiray luuqadaha Soomaaliga Carabiga, Jarmalka, Ruushka, Ingiriiska, Holandeska, iyo Talyaaniga.
Rabi Naxariistii Janno ha ka waraabiyo Janaraal Cabdulqaadir Cali Diiriye (Subxaanyo) wuxuu ahaa ruug caddaa ciidan iyo waayo arag dalka iyo dadka ugu soo shaqeeyay si daacadnimo iyo geesinimo leh.
Allaah U Naxariistee Janaraal Cabdulqaadir Cali Diiriye (Subxaanyo) maalmo kooban ayuu ku xanuunsanaa gudaha dalka waxa uu ku geeriyooyaday Magaalada Muqdisho 03-07, 2021-ka waxaan ilaah u ga baryeynaa in uu hoygiisa ka yeelo Jannatul Fardowsa, samir iyo iimaanna uu ka siiyo qoyskiisa iyo eheladii uu ka geeriyooday iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed.
W/Qoray Oo Soo Diyaariyay Tifaftiraha Guud Ee Sna Radio, Ustaad Omar Mohamad Kulmie (Omar British).